CAYAARAHA DIBADA | Bakool.net | Page 3
Home / CAYAARAHA DIBADA (page 3)
RASMI; Real Madrid oo ku dhawaaqday in Solari ceyrisay badalkiisana macalin Zidane magacowday.
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa si rasmi ah u shaacisay in macalinka kooxda ilaa laga gaarayo 2022da uu yahay macalin Zidane kadib markii ay shaqada ka ceyriyeen Santiago Solari. Real Madrid oo sanadkaan gashay jahwareer ayaa dib usoo ceshatay macalin Zidane oo horay ugu qaaday sadax koob oo Uefa Champions League kadib 2 sano iyo bar oo uu kooxda ...
Macalinkii hore ee kooxaha Manchestrer United, Bayern Munich, Barcelona iyo Ajax Amsterdam ayaa maanta ku dhawaaqay inuu si rasmi ah uga fariistya howlihii tababarnimo ee uu heyn jiray mudadii uu ku dhex jiray kubadda cagta. Luis van Gaal oo kooxda Ajax Amsterdam kula soo guuleystay tartanka Uefa Champions League mudadii uu uu macalinka u ahaa ayaa soo maamulay qaar kamid ...
Real Madrid oo guul muhiim ah ka gaartay kooxda Real Valladolid xili lagu wado in isbuucaan dhexdiisa shaqada macalinimo u magacaabaan Jose Mourinho.
Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa wadada guulaha dib ugu soo laabatay kadib isbuuc jahwareer ay wajahday ayadoo mudadaas isbuuca ah isaga hartay tartamada Horyaalka UCL iyo Cope Del Rey. Real Madrid oo marti u aheyd kooxda Real Valladolid ayaa 1-4 kusoo xasuuqday kadib goolal ay kala dhaliyeen Varane, Modric iyo labo gool uu dhaliyay Banzema. Guushaan ayaa kusoo aadeyso ...
Xhaka iyo Aubameyang oo Arsenal guul muhiim ah ka siiyeen United sidoo kalena kaalinta 4-aad la wareegeen
Kooxda Arsenal ayaa 2-0 guusha kaga qaadatay naadiga Man United kulan ka tirsanaa EPL waxaana cayaartan Gunners-ka guushan muhiimka ah siiyeen Xhaka iyo Aubameyang kuna soo celiyeen Arsenal booska 4-aad kala sareynta horyaalka Ingiriiska. Cayaartan adag ayaa si xamaasad ku dheehan ku bilaabatay waxaana jawiga garoonka sii badalay markii Xhaka hogaanka Arsenal u dhiibay daqiiqadii 12-aad wuxuuna dhaliyay darbad xoogan asigoo goosha ...
Wolves oo taako u dhigtay Chelsea iyo Hazard oo kooxdiisa guuldaro ka bad baadiyay
Eden Hazard ayaa kooxdiisa Chelsea guuldaro ka bad baadiyay kulab ay 1-1 la galeen Wolves weliba xiliga dhimashada ayuu Hazard kooxdiisa fakiyay. Kulankan adag qaybta hore cayaarta wax gool ah la iskama dhalinin inkastoo Chelsea fir fircooneed. Jamaahiirta Blues ee garoonka Stamford Bridge ku sugnaa waxaa ka naxsaday Jimenez daqiiadii 56-aad waxaana kubada caawinaad ka geestay D. Jota. Macalin Sarri ...
Shaxda rasmiga ah Arsenal vs Man United kusoo galayaan Matic iyo Ozil oo shaxda kowaad soo galeen
Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay shaxda ay garoonka kusoo galayaan kooxaha Arsenal iyo Man United ayadoo labadan koox boosaska 3-aad iyo 4-aad u dagaalamayaan. Matic ayaa kasoo kabtay dhaawacii uu qabay halka Ozil isagana shaxda kowaad soo galay. Fadlan hoos ka eeg shaxda rasmiga ah Arsenal vs Man United kulanka kusoo galayaan: Arsenal XI: Leno; Sokratis, Koscielny, Monreal; Kolasinac, Xhaka, ...
Mane iyo Firmino oo min labo gool dhaliyay kana caawiyay Liverpool iney guul weyn ku gaarto Anfield kahor kulanka arbacada ee UCL.
Kooxda Liverpool oo ku cayaareysay garoonkeeda Anfield ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Burnley kuwaaso gool ku harmary kadib khalad garsoore oo dhacay. Liverpool oo aan labadii sano ee ugu dambeysay looga badinin Anfield ayaa soo dhaweysay kooxda Burnley ayagoo waliba maanka ku hayay guushii ay shalay City gaartay iyo in hogaanka horyaalka 4 dhibcood ku qabatay. Daqiiqadii 6aad ...
Daafaca reer Holland ee Hogaamiyaha u ah Liverpool Virgil van Dijk ayaa la Hadal Hayaa in Xagaagan saxiixiisa qal qaalo ugu jiraan labada naadi Spain ugu awooda badan Real Madrid iyo Barcelona sida Express qortay. Balse maamulka Liverpool ayaa arinkan ka gaashamanayaan waxayna rabaan in Virgil van Dijk heshiis cusub ka saxiixaan sidoo kalena mushaarkiisa sare looga qaado si uu mudo dheer garoonka Anfield usii joogo. Qandaraaska cusub ee Van Dijk saxiixayo waxay Reds ku siin doontaa £200,000, waxaana xusid mudan heshiiskiisa haatan 2023 ku eg inuu todobaad walbo ku kasbado £125,000 balse Liverpool mushaarkiisa siweyn ayay sare ugu qaadayaan waxayna rabaan in 2025 qandaraaskiisa gaarsiiyo. Van Dijk ayaa muhiim u ah Liverpool asigoo ka caawiyay Reds in 17-kulan shabaqooda difaacdaan sidoo kalena 15-gool ayaa laga dhaliyay xili cayaareedkan oo ay Reds dagaal ugu jiraan hanashada EPL inkastoo Man City hogaanka 4-dhibcood kaga heyso.
Daafaca reer Holland ee hogaamiyaha u ah Liverpool Virgil van Dijk ayaa la hadal hayaa in xagaagan saxiixiisa qal qaalo ugu jiraan labada naadi Spain ugu awooda badan Real Madrid iyo Barcelona sida Express qortay. Balse maamulka Liverpool ayaa arinkan ka gaashamanayaan waxayna rabaan in Virgil van Dijk heshiis cusub ka saxiixaan sidoo kalena mushaarkiisa sare looga qaado si uu mudo dheer ...
Hordhaca kulanka Arsenal vs Man United: Kulan weyn oo Booska 4-aad iyo 3-aad lagu Dagaalamayo
Waqtiga Kulankan La Cayaarayo: 7:30 pm (Xiliga geeska Afrika) Goobta Lagu Cayaarayo: Emirates Stadium Tartanka: English Premier League Garsoore: Jonathan Moss Aqbaaraadka Cayaartooyda Labada Naadi: Arsenal kulankan waxaa ka maqnaan doonaan Lucas Torreira (ganaax), Hector Bellerin (dhaawac), Rob Holding (dhaawac) iyo Danny Welbeck (dhaawac). Balse Alexandre Lacazette ayaa kooxda dib ugu soo laabanayo madaama Khamiistii Europa League uu ganaax ku seegay kulankii Arsenal 3-1 ...
Pep Guardiola oo sheegay in uusan City ka tagi doonin ilaa laga ceyriyo.
Macalinka kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa waxaa lala xiriirinayay inuu qaban doono shaqada tababarnimo ee kooxda kubadda cagta Juventus xili cayaareedka dambe. Warkaan oo xalay soo baxay saxaafadana qortay ayaa mowjado ku abuuray kooxda Manchester City waxaana shaki la galiyay mustaqbalka macalinimo ee Pep kaasoo qandaraaskii City kaga hartay 2 sano. Hase yeeshee macalinka Pep Guardiola ayaa wararkaas caawo ...